Waligay Maan Ilaawin Waxa Nolosha Ugu Muhiimsan- Pual Pogba Oo Waqtiga Ramadan Ku Qaadana Xaramka Iyo Magaalada Maka. - Gool24.Net
Waligay Maan Ilaawin Waxa Nolosha Ugu Muhiimsan- Pual Pogba Oo Waqtiga Ramadan Ku Qaadana Xaramka Iyo Magaalada Maka.
Xidiga xulka qaranka France iyo kooxda Man United ee Pual Pogba ayaa fasixii uga faa’iidaystay in uu ku tago magaalada Maka iyo xaramka si uu u soo guto cumrada isla markaana uu ugu soo soomo dhulka barakaysan.
Pual Pogba labadii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay waxa uu si joogto ah u booqanayay dalka Saudi Arabia si uu u soo guto xajka iyo cumrada isaga oo sawiro soo raaciyay fariin qiiro leh.
Pual Pogba ayaa taageerayaashiisa aduunka la wadaagay sawirada uu ku sugan yahay xaramaynka waxaana sawiradan kala soo muuqday difaaca Chelsea amaahda kaga maqan ee Kurt Zouma.
Pual Pogba ayaa sawiradan soo raaciyay fariinta u dhignayd sidan: “Waligay maan ilaawin waxa ugu muhiimsan nolosha”.
Xidiga muslimka ah ee Pual Pogba ayaa waqtiyo hore ku soo qaatay magaalada barakaysan ee Maka gaar ahaan xaramka wuxuuna markale fasixiisa xagaaga uga faa’iidaystay in uu ku soo cumraysto isla markaana uu bisha barakaysan ee Ramadan ku qaato dhulka barakaysan.
Halka ay ciyaartoyda kale ee kubbada cagtu ka tagaan goobaaha caanka ah ee loo dalxiis tago ee Ibiza iyo Las Vegas ayuu Pual Pogba sanadihii ugu danbeeyay go’aansaday in uu waqtigiisa uga faa’iidaysto wax aakhiradiisa wanaag u keeni kara.
Fariinta uu Pual Pogba ku sheegay in aanu ilaawin waxa noloshiisa ugu muhiimsan oo ah Xaramka iyo in uu cibaadada bisha Ramadaan ku soo gudo Maka ayaa muujinaysa in ayna lacagta badan iyo caanimadiisu mashquulin.
Pual Pogaba ayaa safarka Saudi Arabia soo bilaabay kadib markii uu kooxdiisa Man United u ciyaaray kulankii xili ciyaareedka ugu danbeeyay ee Cardiff City halkaas oo ay jamaahiirta kooxdiisa United isku dhaceen.
Taageerayaasha Man United ayaa aflagaadeeyay Pual Pogba waxaana loo arkay in ay ahaayeen erayo sii xoojinaya go’aanka uu ku doonayo in uu kaga baxo Old Trafford.
Zinedine Zidane ayaa doonaya in uu Pual Pogba keeno Santiago Bernabeu halkaas oo uu doonayo in uu dib ugu dhis ugu sameeyo ciyaartoy kale oo muhiim ah.